Olee otú Iji whiten ezé gị | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "otú whiten ezé gị"
Olee otú iji whiten ezé iji home whitening usoro
Mmiri soda bụ dị na kichin nke nta ọ bụla ụlọ ma na-enyere otú whiten ezé gị. Ndị na-eji mmiri soda dị ka a tastemaker. Mmiri soda na-eji ihicha nzube. Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị irè iji wepụ pungent isi si na friji. Ị nwere ike iji mmiri soda maka nhicha ezé gị. Mmiri soda bụ abrasive na ọdịdị na a mma enyere gị aka wepu unyi si outermost elu nke ezé gị. Ezé enwu gbaa, -a ngaji nke soda, a ole na ole ntapụ mmiri na a ooh adụ-bristled atu. Were soda on your n'ọbụ aka wee tinye tụlee nke mmiri ya na-eme ka a tapawa nke ya. Ugbu a mikpuo na atu nime tapawa na asa ezé gị. I nwere ike iso usoro a dị ukwuu dị ka otu ugboro kwa izu.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 4, 2016 na 10:24 AM
Categories: Whiten Ezé Atụmatụ Tags: home ezé enwu gbaa, otú whiten ezé gị, whiten ezé gị